Maalinta caalamiga ah ee Afka Hooyo oo Muqdisho laga xusay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maalinta caalamiga ah ee Afka Hooyo oo Muqdisho laga xusay
Maalinta caalamiga ah ee Afka Hooyo oo Muqdisho laga xusay
Posted: Hanad Askar - February 21, 2013 Leave a Comment
Munaasabad ballaaran oo ay soo qaban-qaabisay wasaaradda Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee Afka Hooyo taas oo la xuso sanadka sta 21 Feberaayo.
Xafladda Xuska maalinta Afka Hooyo waxaa ka soo qaybgalay wasiirka, Wasiir ku xigeennada Warfaafinta, Khuburro ku xeel dheer qorista Af-Soomaaliga uu kamid yahay Xuseen Sh.Axmed Kaddare, fannaaniin ay kamid tahay Zeynab Xaaji Cali(Baxsan) iyo Dadweyne kale.
Munaasabadda ayaa dadkii ka hadlay waxa ay ku dheeraadeen ka hadlka taariikhda iyo hor-umarinta Af-Soomaaliga maadaama ay maanta tahay maalin caalami ah oo waddan kasta xuso afka hooyo.
Wasiirka warfaafinta iyo Isgaarsiinta C/abdulaahi Cilmimooge Xersi oo ka hadlay Munaasabadda ayaa sheegay in munaasabadan xuskeeda in la sameeyo uu iska lahaa fikrad ahaan R/wasaare Saacid, islamarkaana uu ku faraxsanyahay in Muqdisho laga xuso Munaasabadan taariikhiga ah.
Wasiirka ayaa xusay in ka hor bisha April ay Dowladda Soomaaliya magacaabi doonto hay’adda qaabilsan Dhaqanka Soomaaliyeed si loo dar-dar geliyo Dhaqanka Soomaalida.
Aasaaseyaasha Qorista Afka Soomaaliga oo khudbado ka jeediyay xafladda ayaa ka codsaday Dowladda Soomaaliya inay xoojiso siina tayeeso Af-Soomaaliga, sidoo kalena ay jaamacadaha dalka ka hirgeliso Kulliyad ku saabsan Af-soomaaliga.
Hay’adda UNESCO ee Qaramada Midoobey ayaa ku dhawaaqday sanadkii 1999-kii in maanta oo kale 21-ka Febaraayo loo aqoonsado maalinta Caalamiga ah ee Afka Hooyo.
Xuska maalinta afka Hooyo ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay meesha ka maqan tahay asaasiyaadkii Afka Hooyo sida, Akadeemiyadii Cilmiga & fanka, Maktabadii Qaranka, Matxafkii Qaranka, Tiyaatarkii Qaranka iyo Madbacaddii Qaranka, oo dhamnaatood ku bur-bureen dagaaladdii lagu riiqdey ee Muqdisho ka aloosnaan jirey.
Tan iyo Qaranjabkii Soomaaliya 1991, waxaa hoos u dhacay tayada Af-soomaaliga, waxaa iskoolada badankood wax looga baranayey luuqada aan Soomaali ahayn taas oo kaliftey racii markaas wax bartey in Af-Soomaaliga qoristiisa iyo ku khudbeyntiisuba noqdey mid aad u hoseeya.
Dhagayso: Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Oo Si Wayn Loogu Soo Dhaweyay Magaalada Boosaaso.
Musharax Maxamuud Khaliif oo khudbad taabanaysa xaaladda Puntland u jeediyey xaflad loo qabtey -VIDEO
March 18, 2018 By HORSEED STAFF
Gudoomiye Jawaari Oo Aqbalay Mooshinkii Laga Keenay.
March 18, 2018 By Mohamud Nadif
Deegaanka Goob-Weyn oo markii ugu horeysay laga dhagax-dhigay xarun caafimaad-Dhegayso
March 18, 2018 By Mohamed Jeenyo
Ra’iisul Wasaaraha oo kormeer ku tagay saldhigyada Booliska ee gobolka Banaadir
Shacabka degmada Hobyo oo soo dhaweeyey hormarka ka soconaya degmada- Dhegayso